देवी ज्ञवाली भन्छन्–प्रचण्डकी छोरीको बुद्धि रहेनछ | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतगणना गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोग सत्तापक्षको षड्यन्त्रको गोटी बनेको भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत गएको छ । एमाले मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली आफूले जितेसकेपछि प्रत्यासी माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालले आफ्ना एजेण्ट प्रयोग गरेर मतपत्र त्यातेको आरोप लगाउँछन् । अदालतले आयोगको निर्णय बदर गर्ने र आफू विजयी हुने विश्वास उनलाई छ । कथंकदाचित अदालतले आयोगकै निर्णय सदर गरेमा भने पुनः मतदानमा भाग लिने र आफू जित्ने दाबी उनको छ । ज्ञवालीसँग भरतपुर प्रकरणबारे काठमाण्डुटुडेले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ ज्ञवालीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
म विगत ४० वर्षदेखि जनताको बीचमा रहेर राजनीति गर्दै आएको छु । जनताको मायामा उहाँहरुको खाका पोल्टामा हुर्केको मानिस हुँ । जनताकै बीचमा छु । मतदाता र मेरो बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।
बाहिर विरोध गरे पनि भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ रे नि ?
म र मेरो पार्टी कहिल्यै पनि निर्वाचनको, निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमतको विपक्षमा जान सक्दैन । तर, आफूले हार्न लागेपछि मतपत्र च्यातिदिने र मतपत्र च्यात्नेकै मागअनुसार पुनः निर्वाचनमा जाने हो भने मतदानको के अर्थ रह्यो र ?
फेरि चुनाव भयो भने भाग नलिने ?
निर्वाचन आयोगले गरेको असंवैधानिक कामको विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रिटमाथि अदालतले फैसला देला । त्यसपछि निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय हुन्छ । म अदालतमा विश्वास गर्ने मानिस हुँ । अदालतको फैसला जे आउँछ त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्छु ।
४० वर्षदेखि जनताको खाकमा हुर्केको र मतदाताले पत्याएको दाबी गर्ने मानिसले फेरि निर्वाचनमा गएर विपक्षीलाई हराइदिए हुँदैन र ?
मतदाताले त मलाई जिताई सक्नुभएको हो । मेरा प्रतिद्वन्द्वीले आफू हार्ने निश्चित भएपछि आफ्ना एजेण्टलाई प्रयोग गरेर मतपत्र च्यात्न लगाउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक आयोगले गरेको निर्णय मान्दिन भन्न मिल्छ त ?
निर्वाचन आयोगले सरकारको लाचार छायाँ बनेर काम गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत, निष्पक्षता र विश्वसनियता गुमाएकाले हामीले नमान्ने भनेका हौं । आयोगले भनेको जस्तो मतगणनास्थल कब्जाको स्थिति थिएन । रणभूमि भएको पनि होइन । आफूलाई नियुक्ति दिलाउने सत्ताधारीको लाचार छायाँ बनेर निर्वाचन आयोगले गलत नजिर बसाल्यो । यो नजिरले भविष्यमा पनि आयोगलाई धेरै गाह्रो पर्नेछ । यस्तै हो भनेत भविष्यमा जित्ने सम्भावना भएको कसैले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारै बन्न भएन । जसले हार्ने भयो उसैले मतपत्र च्यात्न पाउने, अनि उसकै मागअनुसार पुनः निर्वाचन गराउने हो भने निर्वाचन नगरेकै राम्रो ।
अदालतले पनि आयोगकै निर्णयलाई मान्यता दियो भने के गर्नुहुन्छ ?
मलाई विश्वास छ कि अदालतले सही फैसला गर्नेछ । मलाई न्याय दिनेछ । अन्यायीहरुलाई कारबाही गर्नेछ । अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा बारेमा यसभन्दा बढी केही पनि भन्न चाहन्न । धाँधली गरेर निर्वाचनका नाममा सर्वसत्तावाद लागू गर्न खोज्नेका पक्षमा अदालत जाँदैन ।
कथमकदाचित अदालतले पनि पुनः निर्वाचनकै पक्षमा फैसला दियो भने ?
जनतालाई कपितपटक भोल हाल्न लगाउने ? एउटा अपारधीले मतपत्र च्यात्ने । अनि फेरि निर्वाचनका नाममा जनतालाई कति दुःख दिने ? फेरि चुनाव भएको अवस्थामा पनि जनता दर्जानले मलाई नै जिताउँनेछन् । हिजो पनि जिताएकै हुन् । फेरि पनि जिताउँछन् । मलाई जनतामाथि पुरै विश्वास छ । मैले त जितबाहेक केही देखेको छैन । सपनामा पनि जित देख्न थालेको छु ।
तपाईंकी प्रतिस्पर्धी रेणु दाहालका बारेमा के प्रतिक्रिया छ ?
बाबु ठूलो नेता भएकाले छोरीलाई पनि नेता हुन मन लागेर चुनाव लड्न आउनुभएको हो उहाँ । बाबु नेता हुँदैमा छोराछोरीले नेता हुन रहर गरेर हुने होइन । त्यसका लागि नेतृत्व क्षमता चाहिन्छ, बुद्धि चाहिन्छ । जनताको मन जित्नुपर्छ । मेरो त बुबा नेता हुनुहुन्न । आफ्नै बलबुतामा जनताको साथ पाएर राजनीति गरेको मान्छे हो म । ४० वर्षदेखि जनताका हरेक सुख दुःखमा साथ दिएर अनवरत रुपमा राजनीतिमा सक्रिय रहेको मानिससँग कुनै योग्यता नभएको, खाली नेताको छोरी भएकै आधारमा चुनाव उठ्न आउनु नै उहाँको दुर्भाग्य हो । दुई दिन आएर भोट मागेर नाटक गर्नेलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् । – काठमाण्डु टुडे